नमस्ते गर्दा व्यक्तिमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास हुन्छ : दिपकराज जोशी, म्यानेजिङ डाईरेक्टर, न्यू मिलेनियम कलेज - Deepak Raj Joshi Deepak Raj Joshi
नमस्ते गर्दा व्यक्तिमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास हुन्छ : दिपकराज जोशी, म्यानेजिङ डाईरेक्टर, न्यू मिलेनियम कलेज
तर, मन्टेश्वरीहरूको प्राथमिकतामा क्रिसमस परेको देखियो ।
यस्ता कुराहरूमा कसले लगानी गरेको छ ? कति लगानी गरेको छ ? खोजीको विषय हो । अहिले हाम्रोमा क्रिसमस, भ्यालेन्टाईन, हलोविन डे बढी मनाउन थालिएको छ तर यहाँका रैथाने पर्वहरू खासै मनाईँदैन । मेरो चाहिँ भनाई के हो भने, हाम्रो पहिला हुनुप¥यो । अनि मात्रै अन्यकोमा जानुप¥यो ।